> Resource> Flash Drive> USB nkebi Iweghachite: Olee naghachi USB nkebi
Enwere m ike Naghachi Data si ehichapụ USB nkebi?
M nwere 16GB USB flash mbanye na m na mberede ehichapụ nkebi. Ugbu a USB FL nwere ike ịbụ ịchọpụta site na kọmputa m ma na-egosi Raw format usoro na 0 byte nke ikike. Ekwenyere m na data ka na mbanye na ọ dị na-efu a nkebi tebụl. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ naghachi USB nkebi? M mkpa n'ezie iji na-enweta data azụ. Daalụ.
USB nkebi nwere ike furu efu ruru dị iche iche ndapụta, dị ka nhichapụ, formatting, faịlụ usoro ure, virus ọrịa ma ọ bụ nsogbu ndị yiri. Dabara nke ọma, USB nkebi ọnwụ adịghị eduga na-adịgide adịgide data ọnwụ. The data na gị USB nkebi ike ka a natara ọ bụrụ na ị kpọfere ọhụrụ ọ bụla data gị USB.
Mgbe o zutere USB nkebi ọnwụ, i kwesịrị ime ihe ngwa ngwa na anya n'ihi na otu oru oma USB nkebi mgbake usoro. Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ ike omume na-enyere gị iji naghachi furu efu, ehichapụ, formatted, ma ọ bụ merụọ USB partitions. Na ya, i nwere ike naghachi niile data echekwara na gị furu efu USB nkebi, gụnyere oyiyi, videos, akwụkwọ, ọdịyo faịlụ, Archive faịlụ, wdg Ọ bụ dakọtara na niile USB ụdị dị ka Kingston, SanDisk, transcend na ndị ọzọ.
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute naghachi USB nkebi ugbu a!
Igosi USB nkebi Iweghachite na 3 Nzọụkwụ
Nke a USB nkebi mgbake ndu dabeere na Windows version nke Wondershare Data Recovery omume, nke nwere yiri arụmọrụ na na na Mac version. Naghachi data si ehichapụ USB nkebi, biko hụ na gị na USB mbanye ike ka a ghọtara site na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode na-amalite USB nkebi mgbake
Mgbe launching Wondershare Data Recovery na PC gị na, ị ga-enweta ihe interface dị ka oyiyi n'okpuru.
Naghachi USB nkebi, ị nwere ike họrọ "nkebi mgbake" mode na-amalite. Nke a mode enyocha kwa furu efu nkebi na gị USB mbanye na Recovers furu efu faịlụ site na ya.
Nzọụkwụ 2 iṅomi furu efu nkebi na gị USB mbanye
Mkpa ka ị họrọ gị USB mbanye ka iṅomi maka partitions na ya mbụ.
Mgbe niile partitions na gị USB mbanye ga-achọpụtara na gosiri na omume window. Ị nwere ike họrọ furu efu nkebi na pịa "Malite" na-amalite ịgụ isiokwu faịlụ na ya.
Nzọụkwụ 3 Naghachi USB nkebi
Mgbe iṅomi risịrị, niile ọdịnaya na gị furu efu USB nkebi ga-egosipụta na window. Ị nwere ike ele hụrụ faịlụ aha ego olee otú ọtụtụ n'ime faịlụ nwere ike natara site gị furu efu USB nkebi.
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji họrọ faịlụ na ị chọrọ iji weghachite na pịa "Naghachi" zọpụta ha ka ha nkebi / mbanye na kọmputa gị.